Dawladda Kenya oo ka cabsi Ka qabta in Mombasa ay gacanta Al-Shabab gasho | Somaliland Post
Home News Dawladda Kenya oo ka cabsi Ka qabta in Mombasa ay gacanta Al-Shabab...
Dawladda Kenya oo ka cabsi Ka qabta in Mombasa ay gacanta Al-Shabab gasho
Kenya (SLPOST)Warbaahinta dalka Kenya ayaa hadal haya walaac ay dawlada Kenya ka qabto in dagaalamayaan ku fikir ah Xarakadda Al-Shabab ay ka dilaacaan magaalada Mombasa oo ah magaalada labaad ee dalka Kenya ugu weyn.
Tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii Al-Shabab ku qaaday suuq ku yaala magaalada Nairobi dawlada Kenya si gaar ah ayay indhaha ugu haysay dhaq dhaqaayo laga waday magaalada Mombasa.
Inkastoo kooxdii suuqa Westgate weerartay ay dawlada Kenya aaminsan tahay inay Soomaaliya ka yimaadeen haddana waxaa dhanka kale hay’adaha amaanka Kenya aaminsan yihiin inay taageero ka heysteen koox ku sugan magaalada Mombasa.
Meesha ugu weyn ee Kenya ka walaacsan tahay waa masaajidka Musa oo Mombasa ku yaala halkaas dhawaan waxaa mar la geeyay ciidamo si gaar ah u tababaran oo dhalinyaro fara badan ka qabtay.
Masjidul Musa dawlada Kenya waxay ka aaminsan tahay in lagu wacyi galiyo dhalinyarada Muslimiinta ah laguna dhiiri galiyo inay ku biiraan Xarakadda Al-Shabab sidoo kalena lagu tababaro dhalinyarada Al-Shabab ku biira ka hor inta aaney Soomaaliya usoo safrin.
Wargeyska Daily Nation ayaa ku waramaya isagoo soo xiganaya xubno ka tirsan hay’adaha amaanka Kenya in dadka la tuhunsan yahay waxaa ka mid ah shaqsi magaciisa lagu sheegay Abu Bakar Shariif Axmed oo ku magac dheer Makaburi.
Makaburi oo ka mid ah shaqsiyaad ay Q,M xanibtay inay dibadaha usafraan mar ayay warbaahinta Kenya kasoo xigatay in isaga iyo bulshada Mombasa ku farxeen sida ay wax uga dhaceen suuqa Westgate wixii xilligaas ka dambeeyay aad baa loo doon doonayay.
Sidoo kalena mar ay waraysatay wakaaladda wararka AFP waxaa uu sheegay inay aad ula dhacsan yihiin dagaalka Jihadka ah ee Soomaaliya ka socda sidoo kalena dawlada Kenya ay mar ka jawaabi doonto duulaanka gar darada ah ee ay Soomaaliya ku qaaday.
“Militry,ga Kenya wax ka xun wixii Westgate ka dhacay ayay ka geystaan Soomaaliya oo waliba oo joogto ah suuqaasna qof Muslim dhab ah kuma geeriyoon waayo Yahuud ayaa laheyd” ayuu yidhi Abu Bakar Shariif Axmed oo ay Shababku ugu yeeraan Makaburi.
Wakaaladda wararka AFP waxay ku waramaysaa in dawlada ay xoog badan galinayso xaqiijinta in magaalada Mombasa oo dawlada uu dhaqaalo badan kasoo galo aaney gacanta u galin kooxo gacan saar la leh Xarakadda Al-Shabab oo Soomaaliya ka dagaalama.